औषधि पसलले खाद्यपदार्थ बेच्न पाउने कि नपाउने ? « Lokpath
२०७७, १३ फाल्गुन बिहीवार २२:३१
औषधि पसलले खाद्यपदार्थ बेच्न पाउने कि नपाउने ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १३ फाल्गुन बिहीवार २२:३१
काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले औषधि र आहारपूरक खाद्यपदार्थ एकै ठाउँमा बेचिएका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग थप छलफलपछि निर्णय गर्ने भएको छ । समितिको आज सम्पन्न बैठकमा ‘खाद्य ऐन, २०२३, औषधि ऐन २०३५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गतका प्रत्यायोजित विधायनका साथै आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियमन सम्बन्धमा थप छलफल आवश्यक रहेको समितिका सभापति रामनारायण विडारीले जानकारी दिए ।
समितिमा आज औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको थियो । औषधि पसलले आहारपूरकका रुपमा रहेको खाद्यपदार्थ बेच्चेपछि खाद्य तथा गुणनियन्त्रण कार्यालयले असहमति जनाउँदै आएको छ । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले खाद्यसँग जोडिएका औषधिजन्य पदार्थ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधि विभागसँग समन्वयमा मात्र बेच्नुपर्ने बताए । उनले औषधि र आहारपूरक खाद्यपदार्थ एकै ठाउँ बेच्दा नकरात्मक असर गर्ने भएको बताए ।
अर्का सदस्य शान्तिकुमारी अधिकारीले औषधि र आहारपूरक खाद्यपदार्थ एकै ठाउँमा बेच्न दिनका लागि दुवैको अनुमतिपत्र हुनुपर्ने बताइन् । खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्य र औषधिको एकै ठाउँमा बेच्न नपाइने बताए । उनले विभागले देशभरी ४३ स्थानबाट अनुगमन गरिरहेको भन्दै अब चाँडै स्थानीय तहसँग मिलेर अनुगमन गर्नसमेत लागिरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेले औषधि विभागमा दर्ता भएका औषधिलाई मात्र औषधि पसलले बेच्न दिनुपर्ने बताए।
काठमाडौं । गोरखामा ट्याक्टरबाट खसेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । सहिदलखन गाउँपालिका-९
मोहम्मद सदरुल/ मोरङ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको महान पर्व रमजान भोलिदेखि शुरु हुने भएको
व्यवस्थापन समितिका सदस्यद्वारा प्रधानाध्यापकमाथि कार्यालय परिसरमै हातपात
काठमाडौं । बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका स्थित श्री राम चरित्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक
नक्कली बैना कागज बनाएर ५० लाख ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली बैना कागज तयार गरी नगद ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको